Isaya 19 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mutongo pamusoro peIjipiti (1-15)
Ijipiti ichaziva Jehovha (16-25)
Atari yaJehovha muIjipiti (19)
19 Mutongo pamusoro peIjipiti:+ Teererai! Jehovha akatasva gore rinomhanya kwazvo uye ari kupinda muIjipiti. Vanamwari veIjipiti vasina zvavanobatsira vachadedera pamberi pake,+Uye mwoyo yevaIjipiti ichapera nekutya. 2 “Ndichakusvudzira vaIjipiti kuti varwe nevaIjipiti,Uye vacharwisana,Mumwe nemumwe achirwisa hama yake nemuvakidzani wake,Guta richirwisa guta, umambo huchirwisa umambo. 3 Ijipiti ichavhiringidzika,Uye ndichavhiringidza zvirongwa zvayo.+ Vachaenda kuna vanamwari vasina zvavanobatsira,Kune vanoita zvemashiripiti nemasvikiro nevafemberi.+ 4 Ndichaisa Ijipiti muruoko rwatenzi akaoma,Uye vachatongwa namambo ane utsinye,”+ ndizvo zvinotaurwa naIshe wechokwadi, Jehovha wemauto. 5 Mvura yemugungwa ichaomeswa,Uye rwizi ruchapwa rwooma.+ 6 Uye nzizi dzichanhuhwa;Migero yeIjipiti yeRwizi rwaNire ichadzikira yopwa. Tsanga nenhokwe zvichaora.+ 7 Zvinhu zvakamera pedyo neRwizi rwaNire, panodira Rwizi rwaNire,Neminda yese yakadyarwa mbeu iri pedyo naNire+ zvichaoma.+ Zvichapeperetswa, uye hazvizovipozve. 8 Vabati vehove vachachema,Vaya vanokanda zvirauro muRwizi rwaNire vacharatidza kuti vari kurwadziwa,Uye vaya vanotambanudzira mambure avo mumvura vachava vashoma. 9 Vaya vanoshandisa tambo dzemufurakisi*+Nevaya vanogadzira machira machena pamudziyo wekugadzirisa machira vachanyadziswa. 10 Varuki vayo vachaodzwa mwoyo;Vashandi vemaricho vese vachashungurudzika.* 11 Machinda eZoani+ mapenzi. Vanachipangamazano vaFarao avo vakachenjera kupfuura vese, vanopa mazano asina musoro.+ Mungati sei kuna Farao: “Ndiri muzukuru wevakachenjera,Muzukuru wemadzimambo ekare”? 12 Zvino varume vako vakachenjera varipi?+ Ngavakuudze kana vachiziva zvasarudzirwa Ijipiti naJehovha wemauto. 13 Machinda eZoani aita zveupenzi;Machinda eNofi*+ anyengerwa;Vakuru vemadzinza eIjipiti vatsausa Ijipiti. 14 Jehovha aita kuti ivhiringidzike;+Uye vatsausa Ijipiti pane zvese zvainoita,Ikaita sechidhakwa chiri kudzedzereka pamarutsi acho. 15 Ijipiti haizovi nebasa chero ripi zvaro rekuita,Ringava rinoitwa nemusoro kana muswe, nhungirwa kana nhokwe.* 16 Zuva iroro Ijipiti ichaita sevakadzi, ichidedera uye ichitya nemhaka yeruoko runotyisa rwayakasimudzirwa naJehovha wemauto.+ 17 Uye nyika yeJudha ichava chinhu chinotyisa chaizvo kuvaIjipiti. Vachatya zvikuru panongotaurwa nezvayo nemhaka yezvakasarudzwa naJehovha wemauto pamusoro pavo.+ 18 Zuva iroro pachava nemaguta mashanu munyika yeIjipiti anotaura mutauro weKenani+ uye achatsidza kutsigira Jehovha wemauto. Rimwe guta richanzi Guta Rekuputsa. 19 Zuva iroro pakati penyika yeIjipiti pachava neatari yaJehovha uye mbiru yaJehovha pamuganhu wayo. 20 Ichava chiratidzo uye chapupu pamusoro paJehovha wemauto munyika yeIjipiti; nekuti vachachema kuna Jehovha nemhaka yevadzvinyiriri, uye achavatumira muponesi, iye mukuru, uyo achavaponesa. 21 Jehovha achazivikanwa nevaIjipiti, uye vaIjipiti vachaziva Jehovha pazuva iroro; vachapa zvibayiro nezvipo uye vachaita mhiko kuna Jehovha voizadzisa. 22 Jehovha acharova Ijipiti,+ achairova oiporesa. Vachadzoka kuna Jehovha, uye iye achanzwa kuteterera kwavo ovaporesa. 23 Zuva iroro pachava nemugwagwa mukuru+ unobuda muIjipiti uchienda kuAsiriya. Asiriya ichabva yaenda kuIjipiti, uye Ijipiti ichaenda kuAsiriya. Ijipiti ichashumira Mwari pamwe chete neAsiriya. 24 Zuva iroro Israeri ichava yechitatu iri pamwe neIjipiti neAsiriya,+ iri chikomborero pakati penyika, 25 nekuti Jehovha wemauto achange aikomborera, achiti: “Vanhu vangu, iyo Ijipiti, nebasa remaoko angu, iyo Asiriya, nenhaka yangu, iye Israeri, ngavakomborerwe.”+
^ Ichi chirimwa chakabvira makare kare chichirimwa. Tambo dzinobviswa pachiri dzaishandiswa kugadzira machira.
^ Kana kuti “vachava nemweya inoshungurudzika.”
^ Kana kuti “eMemfisi.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “bazi remuchindwe kana tsanga.”